Ukuvinjelwa Kwe-Flash Kubo Bonke Abaphequluli
I-inthanethi isebenza kangcono ngaphandle kwe-Flash
NgoLwesihlanu, ngoJuni 11, i-2010 ULwesibili, May 3, 2016 Douglas Karr
USteve Jobs wayenjalo kwesokudla. Umuntu wokuqala owangeluleka ngokuthi ngithole i-Flash blocker kwakunguBlake Matheny. UBlake ungomunye wonjiniyela abaphambili engake ngaba nenjabulo yokusebenza nabo - futhi ngisebenze naye bobabili kwa Ukuhlanganiswa futhi ku ChaCha. Ubungacabanga ukuthi bengizolalela umfana oguqule yonke ingqalasizinda kanye nesikhulumi okungenani izinkampani ezimbili zobuchwepheshe ezihlukile.
Angimlalelanga. Bengimane ngilokhu ngizihlanganisa ... ngisebenzisa i-Chrome neFirefox futhi ngibuka amakhasi emakhaza, itafula, noma ngivale ikhompyutha ephathekayo okwesikhashana. Kwesinye isikhathi, bekufanele ngibulale iziphequluli.
Kuleli sonto eledlule, ngibe nomhlangano omuhle noMichael Cloran kusuka Idolobha Lonjiniyela. UMichael uqoqe okuhle kunakho konke kunjiniyela ithalente ngokuqala kwakhe ibhizinisi… futhi uqagele ini? Bonke basebenzisa ama-flash blocker. Ungitshele ukuthi usanda kuqala ukusebenzisa eyodwa futhi bekungakholeki ukuthi amasayithi anikezwa ngokushesha kangakanani nokuthi zimbalwa kangakanani izinkinga abe nazo.
Ngakho-ke, ngoLwesibili nginqume ukuyizama. Ngilayishe i-flash blocker ye-Chrome. Ngibe sezulwini isonto lonke. Yonke into ilayisha ngokushesha, akukho lutho oluba yiqhwa, futhi angiphuthelwa yi-Flash. Ngezikhathi ezithile, ngidinga i-Flash ukuze i-blocker ingivumele ukuthi ngichofoze nje ku-Flash element futhi ilayishe phezulu. Ngokwengeziwe, ngingachofoza kwesokudla (isb.YouTube) bese ukhetha ukuvumela iFlash ukuthi ilayishe njalo kusuka kusayithi.
Uma usebenzisa esinye isiphequluli, unezinketho:
Firefox - I-Flashblock Engeza.
safari - ChofozaToFlash.
I-IE 7 - I-Ad blocker ine-Flash blocking.
I-IE 8 - inokuguqulwa kokuvula ukuvinjelwa kwesayithi ngakunye kwe-Flash.
Uzomangala ukuthi mangaki amasayithi asebenzisa iFlash. Nginomuzwa wokuthi abanye babanikazi besayithi abakwazi nakukuqaphela lokho. Ngezikhathi ezithile, ngangilayisha le bhulogi futhi ngingaqapheli ukuthi izikhangiso ezi-3 zaziza ngeFlash. Akukho lutho flashy mayelana nabo… kepha bakhona!
Nasi isibonelo esisobala, indlela ye- Ixwayisa uCastor ngaphandle kweFlash. Ukugxila phezu kwe-flash kuyakuqhakambisa bese uchofoza kukho kuqhuba imojuli yeFlash.
Njengoba i-HTML 5 iba ngokoqobo, i-Adobe idinga ngempela ukuyithola kodwa igiya lokuyakha kabusha iFlash kusuka phansi kuya phezulu. Angithandi ukuvumelana noSteve Jobs, kepha kulokhu ufile. Ngokuqondene nezinkampani ezibamba ikusasa lazo ku-Flash, ungahle uthande ukuthola uhlelo lokubuyisela emuva. Uma ungakayiboni i-HTML 5, i-Apple ine ukubonakaliswa okukhulu… Yize zidinga ukuthi usebenzise iSafari ukuyibuka.
Tags: isikhangiso blockeri-adobe flashixwayisa ukhastorblake mathenychachaubhabhaukuvumelanaflashisibambisoukuvinjelwa kwesiza ngakunyeimisebenzi ye-steve
Ividiyo ekwakhiweni kuqhathaniswa nokusetshenziswa